အချစ်ရေး Archives - Page2of 105 - Padaethar
မအော်ပါနဲ့.. ခံစားလွယ်တာ မိန်းကလေး တွေပါ ချစ်သူ တွေဆိုရင်ပိုတောင်ခံစားလွယ်တယ်ချစ်သူ ကောင်မလေး ကို တကယ်ချစ်မှ အောက်ကစာတွေ ဆက်ဖတ်ပါ မအော်ပါနဲ့.. ခံစားလွယ်တာ မိန်းကလေး တွေပါ ချစ်သူ တွေဆိုရင်ပိုတောင်ခံစားလွယ်တယ် ဘာအကြောင်းရှိရှိ မအော်ပါနဲ့ စကားနဲ့ပဲပြောပါ …သူတို့ပဲအော်ပါစေ… လက်မပါနဲ့.. မိဘ တွေကတောင် မရိုက်ရက်တဲ့နုနယ်တဲ့ မိန်းကလေး ပါ ရိုက်ဖို့နေနေသာသာ အော်တာတောင်လွန်လှပီ သူ့ မိဘ ထက် မင်းကပိုကောင်းအောင်ထားနိုင်ရင်တောင် လက်ပါဖို အခွင့်အရေးမ ရှိဖူး ( ခုတလော မိန်းကလေး တွေကပဲလက်ပါနေသလိုပဲ ) အလိုလိုက်ပါ. အလျှော့ပေး ပါ. သည်းခံပါ.. သူမကိုအလျှော့ပေးတာက ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာ အလုပ်နဲ့သက်သေပြတဲ့သဘောပါပဲ ချစ်သူဘဝမှာတောင်အလျှော့မပေးနိုင်ရင် လက်ထပ် ပီးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ငါ့ ချစ်သူ က ငါ့ကိုဘယ်လောက်အလျှော့ပေးတယ် … Read more
April 20, 2021 by Padaethar
အမျိုးသမီး တွေကို ဆွဲဆောင်ရာမှာ ရုပ်ရည်ထက် ပိုပြီးအရေးကြီး အရာ ( ၃ ) ခု
မိန်းကလေးဆိုတာမျိုးက အချော့ကြိုက်တယ်၊ ကိုယ့်ကို အလိုလိုက်တာမျိုးကို သဘောကျကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကို ဦးစားပေးသလို သည်းသည်းလှုပ် ချစ်ပြတဲ့ ယောက်ျားမျိုးဆိုရင် ကြွေမှာပဲမဟုတ်လား။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ ယုံချင်စရာမကောင်းဆုံး ယောက်ျားတွေပါ။ သည်းသည်းလှုပ်ချစ်ပြတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ပြီဆို ဒီအချက်တွေကိုသာ တွေးကြည့်လိုက်ပါ။ ၁။ ငြင်းခုံမှုမရှိတာ ကိုယ်နဲ့သူ့ကြားမှာ အငြင်းပွားစရာ တစ်ခုခု ဖြစ်လာပြီဆိုပါစို့။ ဥပမာ ဘောပွဲလောင်းမိတာမျိုးပေါ့။ အဲ့ဒီအခါ ” ငါက ယောက်ျားလေးပဲ ဒါမျိုးတော့ အနည်းအကျဉ်း လုပ်မိမှာပဲ” ဆိုပြီး ပြောလာရင် စိတ်မဆိုးလိုက်ပါနဲ့။ သူက အမှန်ပြောနေတာပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ပြောတာကို စသလိုနောက်သလိုနဲ့ စကားလမ်းကြောင်းလွှဲပစ်တာမျိုးက နောက်ကွယ်မှာ ထင်တိုင်းကြဲမယ့်သဘောပါပဲ။ ၂။ ကိုယ်အလုပ်များနေရင် စိတ်ကောက်တယ် ချစ်သူကောင်း ယောက်ျားကောင်းဆိုတာ ကိုယ့်ကောင်မလေး အလုပ်များနေရင် နားလည်ပေးတတ်တာချည်းပါပဲ။ အလုပ်တွေကို … Read more
သူဌေး ဖြစ်ချင်သူနှင့် သာမန်နေထိုင်သူတို့အကြောင်း
မရှိခြင်းကို အကြောင်းပြ ငြီးထွားနေတတ်သူ သည် မချမ်းသာနိုင်ပေ။ရှိတာလေးကို မကွယ်မဝှတ် သူနေရာနှင့်သူ အသုံးချတတ်သူသည် တိုးတတ်ကြီးပွား ပေ သည်။ ( ၁ ) ချမ်းသာချင်သူကတော့ စိတ်ကို လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်ခိုင်းသည်ရင်းနှီးသင့်တာကို ရင်းနှီးသင့်စေ၏သာမန်သူ တစ်ယောက်ကတော့နောင်ရေးကို တွေး၍ ပိုက်ဆံစုတတ်သည်။ ( ၂ )ချမ်းသာချင်သူ ကတော့ ကျေးဇူးတရား ကို လက်ကိုင်ထားသည်မမေ့မလျော့ မတွန့်မတို နှမြောခြင်းကင်းစေ၏သာမန်သူ တစ်ယောက်ကတော့ ကျေးဇူးတရား ကို နောက်အဆင်ပြေထိစောင့်ရင်းစုဆောင်းထားသော ငွေကြေးကို နည်းနည်းချင်းဖဲ့သုံးတတ်သည်။ ( ၃ )ချမ်းသာချင်သူ ကတော့ဆုံးရှုံးသွားသော ငွေကြေး ကို နောင်တမရတတ်ပဲငွေကြေး မရှိတဲ့ဘဝကို စိတ်ပျက် မငြူစူပဲ အခက်အခဲကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြက်သန်းတတ်၏သာမန်သူကတော့ငွေကြေး မရှိရင် ပျော်ရွှင်မှု မရနိုင်တော့ဘူးရယ်လိုတွေးထင်နေထိုင်တတ်ပါသည်။ ( ၄ … Read more
ဘဝအတွက် ရည်ရွယ်ထားသူနဲ့တွေ့ရင် ဒါတွေမေးကြည့်ပါ
ဘဝအတွက် ရည်ရွယ်ထားသူနဲ့တွေ့ရင် ဒါတွေမေးကြည့်ပါ ချစ်တို့ရေ ဘဝအတွက် လို့တွေးမိတဲ့သူပေါ်လာရင်တော့ ဒီမေးခွန်း၅ ခုမေးကြည့်ပါဦးနော်။ သမီးရည်းစားထားတဲ့အခါ ဘဝအတွက်ရည်ရွယ်ချက် ပြီးတော့ပဲ ရည်းစားဖြစ်တာချည်းပါပဲ။ဒါပေမယ့် လည်းတစ်ခါတလေရည်းစားအဆင့်နဲ့ဘဝဟာအဆုံးသတ်လိုက် ပြီး ဘဝလက်တွဲမယ့်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိူမရောက်တာတွေရှိတယ့်နော် အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ရင်ထဲစိတ်ထဲမှာ တကယ့်ကိူ လက်တွဲချင်စိတ် လက်ထပ်ချင်စိတ် ဖြစ်မိတဲ့သူလည်းရှိမှာပါ အဲဒီလို စိတ်ခံစားချက်တွေရှိနေတဲ့သူနဲ့တွေ့ရင်တော့ မေးကြည့်ရမှာတွေရှိပါတယ့် ကိုယ့်ကိုယ့်ကို မေးရမှာတွေ့ရှိသလို သူကိုလည်းမေးပါ။ သူနဲ့ဆိုရင် စိတ်ချမ်းသာမှာသေချာလား ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့အတူနေရင်တော့စိတ်ချမ်သာမှာပေါ့လို့ ပြောမှာသေချာပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူအနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ လက်တွဲဖော် အဖြစ်စဉ်းစားရမှာပါ။ သူနဲ့တသက်လုံး စိတ်ချမ်းသာမှာလား တွေးပါ။ သူရဲ့အမူအကျင့်တွေက ကိုယ့်ကို တကယ်ပျော်ရွှင်စေနိုင်လားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ။ ကိုယ်ကရော တသက်လုံးပျော်မလားတွေးပါ။ ခွင့်လွှတ်နိုင်လား အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာချစ်သူဘဝနဲ့ အများကြီးခြားနားတယ်ဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်သူရဲ့အပြုအမူအကျင့်တွေကို အကုန်လုံး သေချာသိပြီလား ဒါတွေကိုရောခွင်လွတ်နိုင်လားဆိုတာပါတွေးပါ သေးသေးမွှားမွှားလေးကအစပေါ့။ ချစ်သူဘဝမို့ အဆင်ပြေအောင် … Read more